Iphepha lebhokisi yokuhanjiswa kwephepha Isakhelo masivumele ibhokisi ukuba yomelele ngakumbi kwaye yomelele, inokuthi inyuse kakhulu umthamo webhokisi, inkulu ngokuxhathisa ukusinda, ukumelana nokuguga, amandla amakhulu okuthwala, ukuzolula, ucinezelo, iinyembezi, ubushushu obuphezulu, umbala osisityebi, ukupakisha uhlobo-lwengeniso ibhokisi inokusetyenziselwa inzuzo kunye nokupakishwa kwemveliso yokuhambisa, ukukhanya, ukuhlala ixesha elide, ukubambeka.
PP incence incence kumgangatho protec kunye nokwakha ukukhusela zingenziwa ubungakanani elungelelanisiweyo kunye roll, ngokuqhelekileyo ubukhulu 2-7mm zamafu, ngokutsho isicelo ezahlukeneyo, oko kungenziwa ukukhusela ultra-violet, anti-emileyo, conductive, nelangatye nekudodobalisa, isiko imibala, inhibitors ezonakalisayo zenze iphepha elikhethekileyo lep.
Iphepha elihonjisiweyo (i-Polypropylene Hollow Corrugated Plastic Sheet) yiphepha elineewindows elikhutshiweyo elineendonga ezimbini ezicaba ezixutywe ziimbambo ezime nkqo. Kk, iphepha elize lithe laziwa njengephepha lephepha, iphepha lebhodi elincinci, iphepha lebhodi elingenanto, iphepha lephepha, iphepha lebhodi, iphepha le-correx kunye nephepha le-coroplast.
I-ESD iphepha elingenanto linobunzima bokukhanya, bomelele, ubungqingqwa obufanayo, umphezulu ogudileyo, ukumelana nobushushu obuhle, amandla oomatshini aphezulu, uzinzo lweekhemikhali oluhle kunye nokugquma ngombane, iimpawu ezingezizo ityhefu.
Kk storges storages cage is made by pp can metal, the pp incence board is a wall and layer pad for the cage cage, according to the different cage size, the pp hollow sheet can customized made size different, the pp incence sheet also can fold, Ibhodi enamawele-udonga olugqibeleleyo ilungele ukukhusela iimveliso xa ushukuma kunye nengeniso.
Iphepha elingenanto li-polypropylene (PP) njengezona zinto ziphambili emva kweplastiki yokubumba, ngenxa yokuphindaphinda kwezinto ezibonakalayo kunye nemveliso, ukukhutshwa kwenkqubo yokuvelisa kuyenza into entsha yokukhusela okusingqongileyo eye yamkelwa kwihlabathi liphela, kwaye inokusetyenziswa njengebhodi yeenkuni, ikhadibhodi kunye nensimbi yesinyithi kwiindawo ezininzi Ukutshintshwa kwezinto.
Iphepha elinoxutywe ngamazinki lisetyenziswa kakhulu xa kupakishwa isilika, ukupakisha, ukuhambisa impahla, indawo yokugcina izinto. Iphepha le-pp elithambileyo le-silika lijikelezisiwe lenziwe, ngumaleko wepali we-silkspins owahlukileyo kunye nokukhusela.
Kk incence sheet isetyenziswa ngokubanzi kumashishini amaninzi, iphedi umaleko ubungakanani ohlukeneyo kp iphepha kumngxuma iimveliso ezahlukeneyo ibhokisi ukupakisha, iipelethi kunye nabanye ukupakisha. Umaleko ipha iphe iphepha ezibuhlazarha ngokweemveliso ezahlukeneyo, ukupakisha ezahlukeneyo zemveliso ngokwezifiso kunye nemilo eyahlukileyo kunye nokukhusela iimveliso xa upakisha kunye nokuthumela. Isetyenziswa ngokubanzi kwiibhotile zokupakisha kunye nokuhambisa, isitora, indawo yokugcina izinto, iimveliso ezahlukileyo, izitokhwe zokugcina, iitoti zokuhambisa kunye nezinye iibhotile zokupakisha.